Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-emeghe Ihe Ndị Na-akpata Ihe Ndị Na-akpata
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha ya "Rodri". Mkpanaka Rodrigo Hernandez na Mkparịta ụka Ụmụaka anyị na Rodrigo Hernandez na-agbakwụnye akụkọ na-adịghị mma. Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo banyere ndu ndu ya, ihe omuma nke nna ya, akuko omuma tupu akwanyere ya, bilite aka n'akwukwo akuko, nmekorita, ndu na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ egwuregwu, igbe na-agba ọkpọ ọkpọ nke a hụrụ dị ka onye nọchiri Sergio Busquets. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Rodrigo Hernandez nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite, aha ya zuru ezu; Rodrigo Hernandez Cascante. Rodri, dị ka a maara ya nke ọma ma ọ bụ kpọọ, bụ nanị aha aha. Ị maara… Aha "Hernandez" bụ aha nna nna ya kpọrọ aha ya, ebe aha "Cascante" bụ nke ezinụlọ nne ya.
Dị ka omenala Spanish si kwuo, Rodrigo bu aha: Rodrigo Hernandez Cascante. A mụrụ ya n'ụbọchị 22nd nke June 1996 na Madrid, Spain. Banyere ezinụlọ ya, Rodri bụ onye obodo Madrileno dị ọcha. Nke a pụtara n'ụzọ nkịtị na ọ bụ onye amaala ma ọ bụ onye bi na Madrid.
Na-etolite dị ka nwatakịrị na Spanish Football obodo Madrid, ọ bụ ihe ziri ezi maka Rodri iji hụ mmasị egwuregwu ahụ mara mma. Ọ nọ n'etiti ụmụaka ndị ahụ na-akpụzi ihe n'ime bọl bọl ma na-agba ya ụbọchị dum. Ịgba bọlbụ mmalite mmalite bụ ihe ndị mụrụ ya chọrọ maka ya. Otú ọ dị, nke ahụ bịara na mmesi obi ike ahụ site n'aka Rodri ghara imebi iwu ya maka ọzụzụ nkuzi.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Rodri ama etolite ke obio Spain, ke ufọkn̄wed ufọkn̄wed. Ọ kụziiri ya mgbe nile na ọ dị mkpa ịkụziri ya ihe site n'oge ọ bụ nwata, ihe na-esote ya ruo n'ịbụ okenye n'agbanyeghị na ọ na-eme ọtụtụ ego site na bọl.
"Ndị mụrụ m na-enye m nri dị mkpa maka agụmakwụkwọ kemgbe m bụ nwata,"
Rodri mere ka a mata ya na Marca ebe o nwere akwụkwọ ya n'aka ekpe na bọl bọl aka nri.
Rodrigo Hernandez - Bọl na Ọkachamara Ọmụmụ. Ebe E Si Nweta Eke.
Ịga ụlọ akwụkwọ nyere nwa okorobịa Rodri ohere ka ọ nwee mmasị n'ịgba bọl asọmpi n'oge oge egwuregwu. Mgbe oge ụlọ akwụkwọ gasịrị, ọ na-eji ohere n'efu ya na football football na mpaghara ya na-azụlite na ịkụziri onwe ya, ọrụ nke na-atọ ndị mụrụ ya ụtọ ma kpalie ha ime ihe.
N'oge ụfọdụ, nne na nna Rodri doro anya na obere nwa ha nwoke bụ ezigbo ego na bọl. Hụnanya dị otú a kwụrụ ụgwọ zuru oke dị ka Rodri kpọrọ Atletico Madrid maka ule.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ndụ Mmalite
Ọchịchọ Rodri nwere maka bọl hụrụ ya n'afọ 2006 (mgbe ọ dị afọ 10) na-anwale ọnwụnwa na agba na-efe efe ma debanye aha na klọb mpaghara, Rayo Majadahonda onye nyere ya ikpo okwu iji tọọ ntọala ọrụ ya.
Rodri sonyeere ndị ntorobịa n'otu oge ahụ Lucas (enyi ya na Atletico Madrid) na nwanne ya, Theo Hernández. Ọ bụ ngwa ngwa maka Rodri na ụmụnna Hernandez ka ha nwee ike igosi ụlọ ọrụ ahụ. Ha niile soro ndị ọzọ 10 dị afọ iri na ụma na-enyere ha aka ka ha merie egwuregwu ahụ.
Nanị otu afọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ, mgbe ọ dị afọ iri na otu, Rodri na ụmụnna Hernandez hụrụ onwe ha ọzọ na-agafe ikpe ọzọ na idebanye aha na Atletico Madrid. N'okpuru ebe a bụ foto nke Rodri obi ụtọ na uwe elu Atletico ya.
Oge mmalite nke Rodrigo Hernandez na Atletico Madrid. Ebe E Si Nweta Maka Activo
Mmadụ atọ ahụ na-agbakọ ọnụ ma na-apụ na ha, na-enweta aha a na-akpọ "ezinụlọ”. Mgbu, mgbe Lucas na Theo nwere ọganihu n'osisi ahụ, ọganihu Rodri kwụsịrị n'agbanyeghị inye ihe kacha mma.
Ọrụ Rodrigo Hernandez Early Care Story na Atletico Madrid. Ebe e si nweta ya SideHumo.
Otu ebubo ndị isi ụlọ ọrụ boro ya bụ na ọ dara oke ike. Nsogbu a adịghị mma nọgidere na-akpali Julian Munoz, bụ onye isi ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ n'oge ahụ, chụga Rodri n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ Spain ebe ọ sonyeere ndị ntorobịa nke FC Villarreal.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Akpanwu akwukwo akuko
Na mbụ, ọ bụghịrịrị Rodri mfe ịhapụ ụlọ ọgbakọ ebe ọ na-atụ anya na ọ ga-aga nke ọma. Ndị mụrụ ya na ndị òtù ezinụlọ ya chere na e mesoro ya omume na-ezighị ezi.
N'oge ọpụpụ ya, Rodri n'onwe ya adịghị mkpụmkpụ ma dịkwa oke ike. Ọ dị ihe dịka 1.84 mita mana mana enwere ike n'oge ahụ, enweghị ike ike.
AKWỤKWỌ NDỊ NA-AHỤGHỊ EZIOKWU:
Rodri ama adaha ke Atletico Madrid, eto emi enye ọkọkọri okokụtde. Nrọ ya nke igwu egwu na okpukpo Spanish amaghi akpọnwu dika nkpuru-vine n'anwu ma o bu dika oria.
N'oge ọ bụla, a malitere ịza ekpere ya. Rodri toro na mita 1.91 ma rụọ ọrụ ebube, ọ na-etolitekwa n'ụzọ anụ ahụ ma jiri nkà na-eme ka ìgwè ndị Villarreal nọrọ n'ime afọ abụọ mụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Rodrigo Hernandez Ụzọ a na-ewu ewu Akụkọ. Ebe E Si Nweta Eke.
Afọ 2015 bụ mgbe Rodri malitere imere onwe ya aha. N'afọ ahụ, o nyeere akụkụ Spanish ya aka n'ịgụ UEFA European Under-19 Championship.
Rodri so na ndị Spain isii so na Team of Tournament, gụnyere onye mmeri nke Golden Boy Asensio.
Asọmpi ahụ ghọrọ ihe akaebe banyere mmụba nke Rodri dịka okpueze kachasị mma na nwata. Ị maara?… Ikike Rodri nwere na bọl mere ya otu n'ime ndị na-eto eto na-atọ ụtọ nke a hụrụ dị ka EZI KWA na isi nke midfield. Mgbe Villarreal nọ na Rodrọn, Rodri ghọrọ nwoke na ụmụ amaala.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Na-ewu ewu Akụkọ
Ịhụ Rodri ịghọ ihe kachasị mma na nke kachasị na Spain, Atletico Madrid na-akwa ụta maka ịmalite ya na mbụ. Ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ụzọ ha ga-esi gbaghara mgbaghara, otu nke rịọrọ site n'arịrịọ ka ụbụrụ ha furu efu laghachiri na ụlọ nrọ ya. 24 May 2018, Rodri na Atletico Madrid na-agbagha n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ laghachiri na klọb ahụ mgbe ya na Villarreal natara nkwekọrịta ya.
Glaghachi n'isi obodo ahụ na ọtụtụ atụmanya maka ndị na-eto eto Spaniard. Rodri gosipụtara isi ihe ya na ụlọ ọgbakọ ya site n'igosi ike ya na nkà ya n'ọtụtụ egwuregwu. N'okpuru ebe a bụ ihe ngosi nke vidiyo. Ebe E Si Nweta Egwu.
Rodri diri onu ogugu ndi mmadu. Naanị otu afọ na kalenda n'ime nkeji nke abụọ, ọ kwadoro onwe ya dịka aha ezinụlọ. Nke a pụtara ìhè mgbe o nyere ndị otu ya aka ịbanye na Super Cup.
Rodrigo Hernandez Na-ewu ewu Akụkọ. Ebe E Si Nweta Ụkwụ-ndụ.
Rodri nọgidere na-abụ onye ọkpụkpọ egwu nke nwere ike ịkụ egwu ma ụkwụ abụọ, onye hụrụ onwe ya ka ọ bụrụ ọkachamara n'ichepụta bọl ahụ si n'ebe dị elu. N'okpuru ebe a bụ ihe ngosi nke vidiyo.
Nke a na-adọta ọdụdụ kacha elu na Europe, n'etiti ndị nọ Pep GuardiolaNwoke City. Mgbe o gosipụtara nke ukwuu, Rodri na 2018/2019 n'oge okpomọkụ na-enyefe windo kpebiri ime ka Atletico Madrid mara banyere mkpebi ya ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka ọ dị n'oge ederede, asịrị dị iche iche banyere njikọ ya na ya Pep Guardiola onye chọrọ ka ya dochie anya ịka nká Fernandinho. Ndị ọzọ, dị ka ndị football football ga-asị, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Ndụ mmekọrịta
Site na ịrị elu ama ya, ajụjụ ndị dị n'ọnụ onye ọ bụla ghọrọ:
“Onye bụ Nwanyị Rodri ma ọ bụ Nwunye?”
"Ọ bụ Rodri lụrụ?"
"Rodri nwere enyi nwanyị?"
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na ọmarịcha mma ya na 6 ụkwụ na 3 sentimita asatọ n'ogologo agaghị eme ka ọ bụrụ osisi vaịn mara mma nye ụmụ nwanyị.
Otú ọ dị, a ga-agwa eziokwu ahụ. Dị ka n'oge ederede, enwere ike inwe ịhụnanya na-ezighi ezi, nke na-agbanahụ nyocha ihu ọha nanị n'ihi na ndụ Rodri na enyi ya nwanyị a na-amaghị ama bụ nke onwe ya ma ọ bụ nke a na-enweghị ihe ọ bụla.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Ezigbo Ndụ Onye
Ịmata ndụ ndụ nke Rodri ga-enyere gị aka ịchọta nkọwa zuru ezu nke àgwà ya.
Malite, Rodri bụ onye na-eme ka o doo anya na ndụ ya abụghị naanị maka football. Ọbụna dịka ndị na-agbapụ n'ụba, Rodri chọrọ ibi ndu dị ka onye ọ bụla dị elu. N'ezie, Rodrigo Hernandez Personal Life na-achịkọta otu okwu na nke ahụ bụ; "Omume".
Onye ọ bụla nke na - ewepụta oge ya na ya ga - aghọta na Rodri bụ onye nkịtị, onye dị umeala n'obi ma na - azụlite ụlọ na ebe obibi ya mgbe nile.
N'ebe ọ na-agba ọsọ na ọmụmụ ihe, Rodri na-eji oge ya egwu tennis, na-asa uwe ya, na-ele telivishọn na nke kachasị mkpa, na-eme nri ya.
Rodrigo Hernandez Personal Life - Nso ke enye anam ke ufọk. Ebe E Si Nweta Eke.
N'ịchefu ihe ọmụmụ ya, Rodri bụ nwa akwụkwọ Universidad de Castellon, bụ Mahadum na Madrid, bụ ebe ọ na-amụ Mmụta Business na Economics.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Eziokwu nke NdụStyle
Dịka TransferMarket si kwuo, Rodri nwere uru ahịa nke € 80,00 Million nke pụtara na ọ bụ nde ndị nde million. Eziokwu a na-agba ajụjụ banyere ndụ Rodri
Na-amalite, uru ahịa Rodri ya adịghị agara ndụ dị mma n'ihi na ọ maara ihe banyere ijikwa ego ya. Rodri anaghị ebi ndụ dị ka onye nzuzu ma ọ bụ bie ndụ okomoko. Rodri anaghị agbanye ego ya n'ụgbọala ndị na-enwu enwu. Cargbọ ala ya, ruo n'oge na-adịbeghị anya, bụ Opel Corsa nke abụọ nke ọ zụtara n'aka nwanyị dịka n'oge ọ nwetara ikikere ịnya ụgbọ ala.
Ị maara?… N'agbanyeghị na enwere ọtụtụ ndị na-egwuri egwu na LaLiga, ndị mmadụ juru anya ịhụ Rodri ka ọ na-ebi n'ụlọ obibi mahadum na Madrid.
Rodrigo Hernandez Home na Madrid. Ebe E Si Nweta Eke.
N'okpuru ebe a bụ foto nke Rodri na ụlọ nkwari akụ nke Mahadum ya n'agbanyeghị na ọ bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ maka Atletico Madrid, ụlọ ọrụ atọ kachasị ewu ewu na LaLiga.
Rodrigo Hernandez LifeStyle Eziokwu. Ebe E Si Nweta Eke.
Ị maara?… Rodri si onye ọrụ dị mkpa dịkwa oke mkpa. Ebe ndị ọrụ ọzọ na-achọ ego, ọ na-elekọta onye ahịa ya. O doro anya na Rodri agaghị agbanwe ndụ ya dị umeala n'obi. Ọ ka bụ otu ma ọ ga-abụrịrị ndị enyi ya.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ezinụlọ
Ntinye Rodri iji jide n'aka na ndị mụrụ ya na-ebi ndụ dị ala ma na-ezere mgbasa ozi yiri nke ya na ntinye ya. Naanị oge ọ gosipụtara ndị ezinụlọ ya bụ na ngosi ya na Atlético nke bụụrụ ya nnukwu oge.
N'oge nkwupụta ya, Rodri kpọtara ndị enyi 40 na ndị ezinụlọ ya onye hụrụ ya ka ọ na-eyi uwe elu Atlético. Dị ka ndị na-ahụ anya si kwuo, nne nne ya meriri n'oge ahụ site n'igosipụta mmetụta kachasị emetụta ụbọchị ahụ n'ihi mmezu nke nrọ nwa nwa ya.
N'agbanyeghị na ọ masịrị ya, ndị ezinụlọ Rodri na-eche otu ihe. Ugbu a, gwa gị ihe mere n'oge gara aga.
Ndị ezinụlọ Rodri tinyere ndị mụrụ ya gwara ya mgbe ọ bụla ka ọ ghara ịzụta Opel Corsa nke abụọ kama ọ ka mma ụgbọ ala maka nchekwa ya n'oge njem ya site na Madrid gaa Castellon. Ị maara?… Superstar Rodri jụrụ, na-ekwu na ya aghọtaghị ihe kpatara ọ ga-eji tinye ego dị ukwuu n'ụgbọ ala.
"N'ezie, otu oge ọ gwara m na ụfọdụ ndị enyi 'dị nzuzu' maka ịzụta ezigbo ụgbọala, na ihe dị mkpa bụ na ụgbọ ala kwesịrị ịkpọrọ gị site na A ruo B, ọ gwụla."
Otu ihe dị nso na-ekwu ozugbo.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Eziokwu ndị ọzọ
Dị ka n'oge ederede, Rodrigo Hernandez esighị ike kwado ebe ya na Spain malitere iri na otu. Nke a bụ n'ihi Sergio Busquets, Saul Níguez na Thiago Alcântara ka nọ na elu nke ike ha. Ọ bụ naanị oge tupu ọ gbanye ha.
Rodrigo Hernandez Child Story Plus Na-agbaghasị Eziokwu Akụkọ - Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Mkpanaka Rodrigo Hernandez na Ụmụaka. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.